ကားဒိုငျခှကျထဲက အန်တရာယျအရှိဆုံး ခကျြမီး (Check Light) ၅ မြိုး - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ယနေ.ခတျေပျေါကားတိုငျးလိုလို ကား Instrument Panel လို.ချေါတဲ့ ကားဒိုငျခှကျထဲမှာ ကားမှာပါဝငျတဲ့ စနဈအမြိုးမြိုးအတှကျ သကျဆိုငျရာ အခကျြပွ သင်ျကတေ အမြိုးမြိုးပါဝငျကွပါတယျ ။ ဒီလိုအခကျြပွ သင်ျကတေ အမြားကွီးထဲကမှ ကားတိုငျးမှာ မရှိမဖွဈပါဝငျတဲ့ ကားမောငျးသူတိုငျးအတှကျ မဖွဈမနေ သိသငျ့သိထိုကျဆုံး အန်တရာယျ အရှိဆုံး Check Light ၅ မြိုးကို စုစညျးတငျပွပေးလိုကျပါတယျ ။
1. Low Engine Oil Pressure
ဒီမီးက ကားအငျဂငျြဝိုငျနဲ. ပတျသတျတဲ့ မီးဖွဈပွီး တခြို.ကားတှမှောဆို အနီရောငျဆီကတော့ပုံ ၊ တခြို.ကား တှမှောဆို အဝါရောငျ ဆီကတော့ ပုံလေးဖွဈပွီး ၊ ကားတိုငျးလိုလို မရှိမဖွဈပါဝငျပွီး ကားအငျဂငျြအတှကျ အကွီးကွီး ပွဿနာပေး ဒုက်ခပေးတတျတဲ့ အခကျြပွမီးပါ ။
ဒီမီးလေးက ကားသော့ “On “လိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ဒိုငျခှကျထဲမှာ လငျးနမေယျ ၊ ကားစကျနှိုးလိုကျလို. စကျနှိုး သှားတာနဲ. တပွိုကျနကျ ဒီမီးလေး ငွိမျးသှားရပါမယျ ။ ဒါဆိုရငျ ကားမှာ အငျဂငျြဝိုငျတှရှေိနမေယျ ၊ စကျနှိုး သှားတဲ့ အခြိနျမှာလညျး ဒီအငျဂငျြဝိုငျတှကေ သတျမှတျနရော အသီးသီးကို ရောကျရှိနတေယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျပါပဲ ။ ဒါကွောငျ့ မိတျဆှတေို. ကားမောငျးဖို. စကျနှိုးတယျဆိုတိုငျး ကားစကျနှိုးသှားတာနဲ. မဖွဈမနေ သတိပွုရမယျ့ ပထမဆုံး ခကျြမီးက ဒီ အငျဂငျြဝိုငျ ခကျြမီးပါပဲ ။ ကားစကျနှိုးသှားတဲ့အခြိနျဖွဈစေ ၊ ဒါမှမဟုတျ ကားမောငျးနရေငျးဖွဈစေ ဒီ အငျဂငျြဝိုငျပုံစံ မီးလေး ဒိုငျခှကျထဲမှာ လငျးလာတယျဆိုရငျ (ဝါ) ဒိုငျခှကျထဲမှာ မှိတျတုတျ မှိတျတုတျ ပျေါလာတယျဆိုရငျ ကားဆကျမောငျးဖို. အဆငျမပွပေါဘူး ။
ဒီ အငျဂငျြဝိုငျ ခကျြမီးက ဘာကွောငျ့ ပျေါလာတတျသလဲ ?
Engine Oil Level လြှော့တာ ၊ Engine Oil မရှိတာ
Oil Filter ပိတျဆို.တာ
Engine Oil Line တှေ ပိတျဆို.တာ
ဒီ အငျဂငျြဝိုငျ ခကျြမီးလငျးလာတယျ ၊ ဒါမှမဟုတျ မှိတျတုတျ မှိတျတုတျ ခုနျလာတယျဆိုရငျ ဘာလုပျသငျ့သလဲ ?
အယိုအစိမျ့တှလေညျး မရှိဘူး ၊ ကားအငျဂငျြဝိုငျလညျး မညဈသေးဘူးဆိုရငျ ကားအငျဂငျြဝိုငျထညျ့တဲ့ အဖုံးကိုဖှငျ့ စကျနှိုးကွညျ့ပွီး အငျဂငျြဝိုငျ တကျမတကျကွညျ့ပါ
အငျဂငျြဝိုငျတှေ မရှိတော့ဘူး ၊ ယိုစိမျ့နတေယျ ၊ အငျဂငျြဝိုငျ အရမျးညဈနတေယျ ၊ အငျဂငျြဝိုငျ မတကျတော့ဘူး ဆိုရငျတော့ ကားဆကျမောငျးဖို. အဆငျမပွတေော့ပါဘူး ။
ကားမှာပါတဲ့ ခကျြမီးမြိုးစုံထဲက Low Engine Oil Pressure မီးဟာ အငျဂငျြတခုလုံး ပကျြစီးဆုံးရှုံးစနေိုငျတဲ့ အန်တရာယျရှိတဲ့ ခကျြမီးတခုပါ ။ ဒီမီးလငျးတာကို မသိလို. သတိမထားမိလို. အငျဂငျြတခုလုံး ပကျြစီးဆုံးရှုံးရတဲ့ ကားတှမေနညျးပါဘူး ။ ဒါကွောငျ့ သတိထားဖို. အလိုအပျဆုံး ခကျြမီးအနနေဲ.တငျပွလိုကျပါတယျ ။
2. Engine Coolant Temperature Warning Light
Coolant Temperature Warning Light ဆိုတာက ကားအငျဂငျြတခုရဲ. အရေးကွီးတဲ့ အငျဂငျြအပူခြိနျကို ဖျောပွတဲ့ အခကျြပွ သင်ျကတေပါ ။ ဒီ ခကျြမီးက ကားအမြိုးအစားပျေါမူတညျပွီး ဒိုငျခှကျထဲမှာ ပုံစံကှဲတတျ ပါတယျ။
သာမိုမီတာပုံစံလေးပါ ၊ ပုံမှနျအခြိနျမှာ အပွာရောငျ အစိမျးရောငျလေးရှိတတျပွီး ၊ ကားအငျဂငျြ Over Heat တကျလာတဲ့ အခြိနျမှာ အနီရောငျပွတတျပါတယျ ။
H (Hot) နဲ. C (Cool) ပါဝငျတဲ့ လကျတံ သင်ျကတေနဲ. ဖျောပွတဲ့ ပုံစံဆိုပွီး နှဈမြိုးကှဲပါတယျ ။ အောကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့ပုံဆိုရငျ လကျတံက Hot ကို ရောကျနပွေီး အငျဂငျြ Heat တကျနတေဲ့ပုံဖွဈပါတယျ ။
ပုံမှနျအခွအေနမှောဆိုရငျ ကားမောငျးနတေဲ့ အခြိနျမှာ ဒီလကျတံက H နဲ. C ရဲ. ကွား အလညျမှာ အမွဲရှိနရေမှာဖွဈပါတယျ ။
ဒီ Engine Coolant Temperature Warning Light ကတော့ ကားမောငျးနတေဲ့ အခြိနျမှာ အမွဲ သတိထား ကွညျ့ရမယျ့ ခကျြမီးတခုပါ ။
ကားမောငျးနတေဲ့အခြိနျ အပျေါပုံမှာ ပွထားသလို အနီရောငျ မီးလငျးလာမယျ ၊ ဒါမှမဟုတျ အောကျပုံမှ ပွထားသလို လကျတံက H (Hot) နားထိ ရောကျနမေယျဆိုရငျတော့ အငျဂငျြ Over Heat ဖွဈနပေါပွီး ကားဆကျမောငျးဖို. မသငျ့တော့ပါဘူး ။ ကားအငျဂငျြတခုလုံး ပကျြစီးတတျပါတယျ ။
Engine Coolant Temperature Warning Light ဘာကွောငျ့ပျေါရသလဲ ?
ဒီခကျြမီးလငျးလာရတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ အငျဂငျြအအေးပေးစနဈ Cooling System မှာ တခုခု ခြို.ယှငျးလို.ပါပဲ ။
ရတေိုငျကီ အဖုံးမကောငျးတာ ( Pressure Cap )
သာမိုစတတျ ( Thermostat ) မကောငျးတာ
ရလေညျအုံ ( Water Pump ) မကောငျးတာ တှကွေောငျ့ဖွဈတတျပါတယျ ။
1.ကားစကျကို အတငျးမနှိုးပါနဲ. ။
2.အဲကှနျးဖှငျ့ထားတယျဆို ပိတျလိုကျပါ ။
3.စကျဖုံးကိုလှပျပွီး အငျဂငျြကို အအေးခံပါ ။
4.ရတေိုငျကီအဖုံးကို ပူနခြေိနျ လုံးဝ (လုံးဝ) သှားမဖှငျ့ပါနဲ. ၊ အေးတဲ့အခြိနျထိစောငျ့ပါ ။
6.ကားမှာ ရတှေယေိုနသေလား ပိုကျတှပေေါကျနလေား ၊ ကှဲနလေား စဈပါ ။
7. အငျဂငျြ အရမျးပူနခြေိနျ ရအေေးတှနေဲ. လောငျးတာ ၊ ရအေေးတှေ ရတေိုငျကီထဲ အတငျးဖွညျ.တာမြိုးရှောငျကဉျြပါ ။
8. ကြှမျးကငျြစကျပွငျဆရာချေါပွီး စဈဆေးပါလို. အကွံပွုတငျပွလိုကျရပါတယျ ။
3. Charging System Warning Light
ဒီခကျြမီးကတော့ အနီရောငျ ဘတ်ထရီအိုးပုံစံ ခကျြမီးလေးဖွဈပွီး ကားအားသှငျးစနဈနဲ.သကျဆိုငျတဲ့ အခကျြပွ မီးဖွဈပါတယျ ။ ဒီခကျြမီးလေးကလညျး ကား အငျဂငျြဝိုငျမီးနဲ. သဘောသဘာဝ ဆငျတူပွီး ကားသော့ “ On “ လိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ လငျးနရေမှာဖွဈပွီး ကားစကျနှိုးလိုကျလို. စကျနှိုးသှားတယျဆိုရငျ ဒီမီးလေး ငွိမျးနရေမှာပါ ။
ဒီလိုမဟုတျဘဲ စကျနှိုးသှားသညျ့တိုငျ ဒီ ဘတ်ထရီအိုးပုံမီးလေးလငျးနမေယျ ဒါမှမဟုတျ ကားမောငျးနရေငျး ဒီခကျြမီးလေး လငျးလာတာ (ဝါ) ဒါ ဘတ်ထရီအိုးပုံလေး ပျေါလိုကျပြောကျလိုကျ ဖွဈလာတာက ကားအားသှငျး စနဈတခုခု ခြို.ယှငျးလာတဲ့ သင်ျကတေပါပဲ ။
ဒီခကျြမီးလေးက အပျေါက နှဈခုလို ကားအငျဂငျြပကျြစီးစနေိုငျလောကျသညျ အထိ ဆိုးဆိုးရှားရှား ဒုက်ခမပေးတတျပမေယျ့ ခရီးသှားရငျး စကျသေ ထိုးရပျတတျတာမို. ဒုက်ခပေးတတျတဲ့ မီးထဲမှာပါပါတယျ ။
ဒီ Charging System Warning Light လငျးရတဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေတော့
Alternator နဲ.တှဲစပျတပျဆငျထားတဲ့ Belt ကွိုးပကျြတာ ခြောငျတာ
Alternator ထိပျက Pulley Ball and Bearing တှေ စားသှားပွီး Free အဖွဈလညျပတျနတော ၊
အျောတာနတော အတှငျးပိုငျးထဲက Carbon Brushes တှကေုနျသှားတာ ၊ တိုသှားတာ ၊ ငုတျအတိုအရှညျပှနျးစားတာ မညီတာ ၊
အတှငျးမှာ သံလိုကျဆှဲအားမညီဘဲ တဖကျဆှဲပွီး အတှငျးပိုငျးပစ်စညျးတှေ ပှတျတိုကျတာ ၊
ဒိုငျအုတျတှပေကျြစီးပွီး Voltage မငွိမျတာ ၊ အားမဝငျတာ ၊
Battery မကောငျးတာ ၊ သကျတမျးလှနျတာ တှကွေောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ ။
ဒီလို Charging System Warning Light လငျးလာပွီဆိုရငျတော့ Battery မှာရှိတဲ့ Voltage ဗိုဈ့အားကို မီတာနဲ. တိုငျးတာကွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ ။
ပုံမှနျကောငျးမှနျတဲ့ Battery တလုံးက 12.60 V လောကျပမျြးမြှရှိပွီး ၊ ကားစကျစစနှိုးလိုကျတဲ့ အခြိနျ Starter Motor ကိုစဆှဲလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ထိုးကသြှားတဲ့ ဗို.အား Votlage Drop က 11. V ကနေ 10. V ထိပဲဆငျး သှားပါတယျ ။ ဒါက အားပွညျ့နတေဲ့ ဘထ်ထရီအိုးကောငျးတဈလုံးအတှကျပါ ။ 11.V ကနေ 10.V အထိပဲ ဆငျးတယျ ဆိုရငျတော့ ဒီ ဘထ်ထရီကို စိတျခလြကျခြ အသုံးပွုနိုငျ ခရီးသှားနိုငျပါတယျ ။
သငျ့ကား လမျးမှာ ဘထ်ထရီဝပျစရာ မရှိနိုငျပါ ။အသုံးပွုထားတာအနညျးငယျကွာပွီဖွဈတဲ့ အိုးတှကေို တိုငျးတာကွညျ့ရငျတော့ ကားစကျ စနှိုးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ 9.5V ကနေ 8.5 V လောကျထိ ဗို.အားထိုးကြ သှားတတျပါတယျ ။
ကားစကျစနှိုးလိုကျတဲ့အခြိနျ သငျ့ကားဘထ်ထရီ ဗို.အားက 8V အောကျဆငျးသှားတယျဆိုရငျတော့ ၊ ခရီးသှားဖို. ဘယျလိုမှ စိတျမခရြတော့ပါဘူး ၊ ကားမောငျးနတေဲ့အခြိနျတော့ အဆငျပွနေပွေီး ၊ ကားစကျသတျ ရပျနားပွီး ပွနျနှိုးခြိနျမှာ ဘထ်ထရီအားကပြွီး စကျပွနျနှိုးလို.မရတဲ့ ပွဿနာနဲ. ကွုံ.တှရေနိုငျပါတယျ ။
။ ပုံမှနျကောငျးမှနျတဲ့ ကားအျောတာနတောတဈလုံးရဲ. Voltage က 13.50 V ကနေ 14.50 V လောကျထိ ပမျြးမြှရှိပါတယျ ။ ကားစကျနှိုးထားပွီး ဘထ်ထရီမှာ တိုငျးတာလိုကျလို. 13 V အောကျကနြတော ဒါမှမဟုတျ 14.50 V ထကျကြျောလှနျနတောမြိုးဆိုရငျတော့ သငျ့ကား အျောတာနတောရဲ. အားသှငျးစနဈ တခုခုပကျြယှငျး နပေါပွီ ။
ဒီလိုမြိုး ဘတ်ထရီအိုးမကောငျးတော့တာ ၊ အားသှငျးစနဈရဲ. အဓိက မိနျးဖွဈတဲ့ Alternator မကောငျးတော့တာ တှကွေောငျ့ ဒီ Charging System Warning Light ပျေါလာတတျပါတယျ ။ ဒီမီးပျေါလာတယျဆိုရငျတော့ ကားဆကျမောငျးဖို. မသငျ့ဘဲ နီးစပျရာ ကြှမျးကငျြကားဝပျရှော့တှမှော ကားအားသှငျးစနဈနဲ. ဘတ်ထရီကို စဈဆေးပွုပွငျရမှာဖွဈပါတယျ ။
4. Tire Pressure Warning Light
ဒီတာယာပုံစံ မီးလေးကတော့ TPMS (Tire Pressure Monitoring System) ကနေ ကားမှာပါဝငျတဲ့ တာယာတှရေဲ. လပေေါငျခြိနျမှနျမမှနျ ကိုတိုငျးတာပွတဲ့ စနဈတခုပါ ။
ဒီမီးပျေါလာရတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ တာယာလပေေါငျခြိနျမမှနျတာ ၊ လမျးသှားရငျး ကားတာယာ ပေါကျတာ ၊ လစေိမျ့တာ ၊ ကားတာယာ လရေော့တာ ၊ လမြေားတာ အစရှိတာတှကွေောငျ့ ဒီမီးလငျးတာ မြားပါတယျ ။ တခြို.ကားတှမှောတော့ Spare Tire လလြေော့ရငျလညျး ဒီမီးလငျးတတျပါတယျ ၊ အထူးသဖွငျ့ Land cruiser ကားတှမှောဆိုရငျ စပယျရာ တာယာရဲ. လပေေါငျခြိနျကို တိတိကကြ ခြိနျတှယျထိုးပေးဖို. လိုပါတယျ ။
ကားမောငျးနရေငျး ဒီမီးပျေါလာတယျဆိုရငျတော့ ကားစကျရပျပွီး ကားတာယာတှကေို သတိပွုစဈဆေး သငျ့ပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ အမွနျလမျးတှမှော ကားမောငျးနတေဲ့အခြိနျ ကားတာယာ လပေေါငျခြိနျ မမှနျတာ ၊ ကားတာယာ ပေါကျတာ ၊ ကှဲထှကျတာတှကွေောငျ့ ကားနဲ.လူ အန်တရာယျဖွဈစတောမြိုးတှေ ကွုံတှေ. ရနိုငျကွောငျ့ ကားမောငျးရငျး ဒီမီးလငျးလာတယျ ၊ ပျေါလာတယျဆိုရငျ အထူးသတိပွု စဈဆေးသငျ့ပါတယျ ။
5. ABS Warning Light
ဒီ ABS ဆိုတဲ့ Warning Light တှကေတော့ Brake (ဘရိတျ) စနဈနဲ. သကျဆိုငျတဲ့ မီးဖွဈပွီး Anti-Lock Brake System ကိုရညျညှနျးတာပါ ။ ဒီစနဈက ကားကို အရှိနျနဲ.မောငျးနတေဲ့အခြိနျ ရုတျတရကျ ဘရိတျဖမျး လိုကျတဲ့အခါ ကားစတီယာရငျကို အသမေဖွဈစဘေဲ လိုသလို ကှေ.နိုငျခေါကျနိုငျအောငျ ဖမျးတီးပေးတဲ့ စနဈပါ ။ဒါကွောငျ့ ဒီမီးပျေါလာတယျဆိုရငျ ကားအရှိနျနညျးနညျးနဲ.မောငျးနခြေိနျတှမှောတော့ အန်တရာယျသိပျမရှိ နိုငျပမေယျ့ ၊ ကားကို အမွနျလမျးလို နရောမြိုးမှာ မောငျးနှငျနခြေိနျ ကားဒိုငျခှကျထဲမှာ ဒီမီးလငျး နတေယျဆိုရငျ တော့ ကားမှာပါတဲ့ ABS စနဈတှေ အလုပျလုပျမှာ မဟုတျလို. အန်တရာယျရှိနိုငျတဲ့ Check Light ထဲ ထညျ့သှငျး ဖျောပွ ထားရပါတယျ ။
ဒီ ABS မီးလငျးရတဲ့ အမြားဆုံး အကွောငျးရငျးတှကေတော့
Wheel Speed Sensors (ဘီးလညျပတျမှု အာရုံခံစနဈ) တှေ ၊ Wiring Connection
Hydraulic Control Unit ၊
Hub ball အစရှိတာတှေ တခုခုခြို.ယှငျးပကျြစီးခဲ့မယျ ဆိုရငျ ABS မီးလငျးလာပါမယျ ။
ဒီ ABS မီးလငျးလာရငျကတော့ ကားကို မွနျနှုနျးမွငျ့ မောငျးနှငျတာမြိုးကို ရှောငျကဉျြသငျ့ပွီး ၊ ကြှမျးကငျြ ဝပျရှော့တှမှော အမွနျဆုံးပွသပွုပွငျသငျ့ပါတယျ ။
အစရှိတဲ့ အခကျြပွမီးတှကေ ကားမောငျးသူတိုငျး မဖွဈမနသေိထားရမယျ့ ကားအငျဂငျြပိုငျးနဲ. ကားမောငျးသူကို အသကျ အန်တရာယျ ထိခိုကျသညျအထိ ဒုက်ခပေးနိုငျတဲ့ ခကျြမီးတှပေါ ။ ဒါကွောငျ့ ဒီခကျြမီးတှကေို သခြောသတိပွု လလေ့ာမှတျသားထားသငျ့ကွောငျး စတေနာထား တငျပွလိုကျရပါတယျ ။
စာဖတျသူ မိတျဆှေ ညီကိုမောငျနှမ မြားအားလုံး နညျးပညာ ဗဟုသုတမြားကွှယျဝွပီး အန်တရာယျကငျး ဘေးရှငျးကွပါစခေမြာ ။
ကားဒိုင်ခွက်ထဲက အန္တရာယ်အရှိဆုံး ချက်မီး (Check Light) ၅ မျိုး
ယနေ.ခေတ်ပေါ်ကားတိုင်းလိုလို ကား Instrument Panel လို.ခေါ်တဲ့ ကားဒိုင်ခွက်ထဲမှာ ကားမှာပါဝင်တဲ့ စနစ်အမျိုးမျိုးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အချက်ပြ သင်္ကေတ အမျိုးမျိုးပါဝင်ကြပါတယ် ။ ဒီလိုအချက်ပြ သင်္ကေတ အများကြီးထဲကမှ ကားတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ်ပါဝင်တဲ့ ကားမောင်းသူတိုင်းအတွက် မဖြစ်မနေ သိသင့်သိထိုက်ဆုံး အန္တရာယ် အရှိဆုံး Check Light ၅ မျိုးကို စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဒီမီးက ကားအင်ဂျင်ဝိုင်နဲ. ပတ်သတ်တဲ့ မီးဖြစ်ပြီး တချို.ကားတွေမှာဆို အနီရောင်ဆီကတော့ပုံ ၊ တချို.ကား တွေမှာဆို အဝါရောင် ဆီကတော့ ပုံလေးဖြစ်ပြီး ၊ ကားတိုင်းလိုလို မရှိမဖြစ်ပါဝင်ပြီး ကားအင်ဂျင်အတွက် အကြီးကြီး ပြဿနာပေး ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ အချက်ပြမီးပါ ။
ဒီမီးလေးက ကားသော့ “On “လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ လင်းနေမယ် ၊ ကားစက်နှိုးလိုက်လို. စက်နှိုး သွားတာနဲ. တပြိုက်နက် ဒီမီးလေး ငြိမ်းသွားရပါမယ် ။ ဒါဆိုရင် ကားမှာ အင်ဂျင်ဝိုင်တွေရှိနေမယ် ၊ စက်နှိုး သွားတဲ့ အချိန်မှာလည်း ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်တွေက သတ်မှတ်နေရာ အသီးသီးကို ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ ။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို. ကားမောင်းဖို. စက်နှိုးတယ်ဆိုတိုင်း ကားစက်နှိုးသွားတာနဲ. မဖြစ်မနေ သတိပြုရမယ့် ပထမဆုံး ချက်မီးက ဒီ အင်ဂျင်ဝိုင် ချက်မီးပါပဲ ။ ကားစက်နှိုးသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်စေ ၊ ဒါမှမဟုတ် ကားမောင်းနေရင်းဖြစ်စေ ဒီ အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံစံ မီးလေး ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ လင်းလာတယ်ဆိုရင် (ဝါ) ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် ပေါ်လာတယ်ဆိုရင် ကားဆက်မောင်းဖို. အဆင်မပြေပါဘူး ။
ဒီ အင်ဂျင်ဝိုင် ချက်မီးက ဘာကြောင့် ပေါ်လာတတ်သလဲ ?
Engine Oil Level လျှော့တာ ၊ Engine Oil မရှိတာ
Oil Filter ပိတ်ဆို.တာ
Engine Oil Pump မကောင်းတာ
Engine Oil Line တွေ ပိတ်ဆို.တာ
Engine Oil Pressure Sensor (or) Switch မကောင်းတာ
ဒီ အင်ဂျင်ဝိုင် ချက်မီးလင်းလာတယ် ၊ ဒါမှမဟုတ် မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် ခုန်လာတယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ ?
ကားမှာ အင်ဂျင်ဝိုင် ရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ပါ
ကားအင်ဂျင်ဝိုင်တွေ ယိုစိမ့်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ပါ
ကားအင်ဂျင်ဝိုင်တွေ ညစ်နေလား ၊ မဲနေလား စစ်ဆေးကြည့်ပါ
အယိုအစိမ့်တွေလည်း မရှိဘူး ၊ ကားအင်ဂျင်ဝိုင်လည်း မညစ်သေးဘူးဆိုရင် ကားအင်ဂျင်ဝိုင်ထည့်တဲ့ အဖုံးကိုဖွင့် စက်နှိုးကြည့်ပြီး အင်ဂျင်ဝိုင် တက်မတက်ကြည့်ပါ
အင်ဂျင်ဝိုင်တွေ မရှိတော့ဘူး ၊ ယိုစိမ့်နေတယ် ၊ အင်ဂျင်ဝိုင် အရမ်းညစ်နေတယ် ၊ အင်ဂျင်ဝိုင် မတက်တော့ဘူး ဆိုရင်တော့ ကားဆက်မောင်းဖို. အဆင်မပြေတော့ပါဘူး ။
ကားမှာပါတဲ့ ချက်မီးမျိုးစုံထဲက Low Engine Oil Pressure မီးဟာ အင်ဂျင်တခုလုံး ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ချက်မီးတခုပါ ။ ဒီမီးလင်းတာကို မသိလို. သတိမထားမိလို. အင်ဂျင်တခုလုံး ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့ ကားတွေမနည်းပါဘူး ။ ဒါကြောင့် သတိထားဖို. အလိုအပ်ဆုံး ချက်မီးအနေနဲ.တင်ပြလိုက်ပါတယ် ။
Coolant Temperature Warning Light ဆိုတာက ကားအင်ဂျင်တခုရဲ. အရေးကြီးတဲ့ အင်ဂျင်အပူချိန်ကို ဖော်ပြတဲ့ အချက်ပြ သင်္ကေတပါ ။ ဒီ ချက်မီးက ကားအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ ပုံစံကွဲတတ် ပါတယ်။
သာမိုမီတာပုံစံလေးပါ ၊ ပုံမှန်အချိန်မှာ အပြာရောင် အစိမ်းရောင်လေးရှိတတ်ပြီး ၊ ကားအင်ဂျင် Over Heat တက်လာတဲ့ အချိန်မှာ အနီရောင်ပြတတ်ပါတယ် ။
H (Hot) နဲ. C (Cool) ပါဝင်တဲ့ လက်တံ သင်္ကေတနဲ. ဖော်ပြတဲ့ ပုံစံဆိုပြီး နှစ်မျိုးကွဲပါတယ် ။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ပုံဆိုရင် လက်တံက Hot ကို ရောက်နေပြီး အင်ဂျင် Heat တက်နေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ် ။
ပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုရင် ကားမောင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီလက်တံက H နဲ. C ရဲ. ကြား အလည်မှာ အမြဲရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီ Engine Coolant Temperature Warning Light ကတော့ ကားမောင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ အမြဲ သတိထား ကြည့်ရမယ့် ချက်မီးတခုပါ ။
ကားမောင်းနေတဲ့အချိန် အပေါ်ပုံမှာ ပြထားသလို အနီရောင် မီးလင်းလာမယ် ၊ ဒါမှမဟုတ် အောက်ပုံမှ ပြထားသလို လက်တံက H (Hot) နားထိ ရောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အင်ဂျင် Over Heat ဖြစ်နေပါပြီး ကားဆက်မောင်းဖို. မသင့်တော့ပါဘူး ။ ကားအင်ဂျင်တခုလုံး ပျက်စီးတတ်ပါတယ် ။
Engine Coolant Temperature Warning Light ဘာကြောင့်ပေါ်ရသလဲ ?
ဒီချက်မီးလင်းလာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ အင်ဂျင်အအေးပေးစနစ် Cooling System မှာ တခုခု ချို.ယွင်းလို.ပါပဲ ။
ရေတိုင်ကီ အဖုံးမကောင်းတာ ( Pressure Cap )
သာမိုစတတ် ( Thermostat ) မကောင်းတာ
ရေလည်အုံ ( Water Pump ) မကောင်းတာ တွေကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
အင်ဂျင် Heat တက်ပြီး ကားထိုးရပ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့
1.ကားစက်ကို အတင်းမနှိုးပါနဲ. ။
2.အဲကွန်းဖွင့်ထားတယ်ဆို ပိတ်လိုက်ပါ ။
3.စက်ဖုံးကိုလှပ်ပြီး အင်ဂျင်ကို အအေးခံပါ ။
4.ရေတိုင်ကီအဖုံးကို ပူနေချိန် လုံးဝ (လုံးဝ) သွားမဖွင့်ပါနဲ. ၊ အေးတဲ့အချိန်ထိစောင့်ပါ ။
6.ကားမှာ ရေတွေယိုနေသလား ပိုက်တွေပေါက်နေလား ၊ ကွဲနေလား စစ်ပါ ။
7. အင်ဂျင် အရမ်းပူနေချိန် ရေအေးတွေနဲ. လောင်းတာ ၊ ရေအေးတွေ ရေတိုင်ကီထဲ အတင်းဖြည်.တာမျိုးရှောင်ကျဉ်ပါ ။
8. ကျွမ်းကျင်စက်ပြင်ဆရာခေါ်ပြီး စစ်ဆေးပါလို. အကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ် ။
ဒီချက်မီးကတော့ အနီရောင် ဘတ္ထရီအိုးပုံစံ ချက်မီးလေးဖြစ်ပြီး ကားအားသွင်းစနစ်နဲ.သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်ပြ မီးဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီချက်မီးလေးကလည်း ကား အင်ဂျင်ဝိုင်မီးနဲ. သဘောသဘာဝ ဆင်တူပြီး ကားသော့ “ On “ လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ လင်းနေရမှာဖြစ်ပြီး ကားစက်နှိုးလိုက်လို. စက်နှိုးသွားတယ်ဆိုရင် ဒီမီးလေး ငြိမ်းနေရမှာပါ ။
ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ စက်နှိုးသွားသည့်တိုင် ဒီ ဘတ္ထရီအိုးပုံမီးလေးလင်းနေမယ် ဒါမှမဟုတ် ကားမောင်းနေရင်း ဒီချက်မီးလေး လင်းလာတာ (ဝါ) ဒါ ဘတ္ထရီအိုးပုံလေး ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက် ဖြစ်လာတာက ကားအားသွင်း စနစ်တခုခု ချို.ယွင်းလာတဲ့ သင်္ကေတပါပဲ ။
ဒီချက်မီးလေးက အပေါ်က နှစ်ခုလို ကားအင်ဂျင်ပျက်စီးစေနိုင်လောက်သည် အထိ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဒုက္ခမပေးတတ်ပေမယ့် ခရီးသွားရင်း စက်သေ ထိုးရပ်တတ်တာမို. ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ မီးထဲမှာပါပါတယ် ။
ဒီ Charging System Warning Light လင်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့
Alternator နဲ.တွဲစပ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ Belt ကြိုးပျက်တာ ချောင်တာ
Alternator ထိပ်က Pulley Ball and Bearing တွေ စားသွားပြီး Free အဖြစ်လည်ပတ်နေတာ ၊
အော်တာနေတာ အတွင်းပိုင်းထဲက Carbon Brushes တွေကုန်သွားတာ ၊ တိုသွားတာ ၊ ငုတ်အတိုအရှည်ပွန်းစားတာ မညီတာ ၊
အတွင်းမှာ သံလိုက်ဆွဲအားမညီဘဲ တဖက်ဆွဲပြီး အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းတွေ ပွတ်တိုက်တာ ၊
ဒိုင်အုတ်တွေပျက်စီးပြီး Voltage မငြိမ်တာ ၊ အားမ၀င်တာ ၊
IC regulator တွေ ပျက်စီးပြီး Voltage အားအတက်အကျ ပြောင်းလဲနေတာ
Battery မကောင်းတာ ၊ သက်တမ်းလွန်တာ တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီလို Charging System Warning Light လင်းလာပြီဆိုရင်တော့ Battery မှာရှိတဲ့ Voltage ဗိုစ့်အားကို မီတာနဲ. တိုင်းတာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ Battery တလုံးက 12.60 V လောက်ပျမ်းမျှရှိပြီး ၊ ကားစက်စစနှိုးလိုက်တဲ့ အချိန် Starter Motor ကိုစဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ထိုးကျသွားတဲ့ ဗို.အား Votlage Drop က 11. V ကနေ 10. V ထိပဲဆင်း သွားပါတယ် ။ ဒါက အားပြည့်နေတဲ့ ဘထ္ထရီအိုးကောင်းတစ်လုံးအတွက်ပါ ။ 11.V ကနေ 10.V အထိပဲ ဆင်းတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီ ဘထ္ထရီကို စိတ်ချလက်ချ အသုံးပြုနိုင် ခရီးသွားနိုင်ပါတယ် ။
သင့်ကား လမ်းမှာ ဘထ္ထရီဝပ်စရာ မရှိနိုင်ပါ ။အသုံးပြုထားတာအနည်းငယ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အိုးတွေကို တိုင်းတာကြည့်ရင်တော့ ကားစက် စနှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ 9.5V ကနေ 8.5 V လောက်ထိ ဗို.အားထိုးကျ သွားတတ်ပါတယ် ။
ကားစက်စနှိုးလိုက်တဲ့အချိန် သင့်ကားဘထ္ထရီ ဗို.အားက 8V အောက်ဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့ ၊ ခရီးသွားဖို. ဘယ်လိုမှ စိတ်မချရတော့ပါဘူး ၊ ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်တော့ အဆင်ပြေနေပြီး ၊ ကားစက်သတ် ရပ်နားပြီး ပြန်နှိုးချိန်မှာ ဘထ္ထရီအားကျပြီး စက်ပြန်နှိုးလို.မရတဲ့ ပြဿနာနဲ. ကြုံ.တွေရနိုင်ပါတယ် ။
။ ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ ကားအော်တာနေတာတစ်လုံးရဲ. Voltage က 13.50 V ကနေ 14.50 V လောက်ထိ ပျမ်းမျှရှိပါတယ် ။ ကားစက်နှိုးထားပြီး ဘထ္ထရီမှာ တိုင်းတာလိုက်လို. 13 V အောက်ကျနေတာ ဒါမှမဟုတ် 14.50 V ထက်ကျော်လွန်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ သင့်ကား အော်တာနေတာရဲ. အားသွင်းစနစ် တခုခုပျက်ယွင်း နေပါပြီ ။
ဒီလိုမျိုး ဘတ္ထရီအိုးမကောင်းတော့တာ ၊ အားသွင်းစနစ်ရဲ. အဓိက မိန်းဖြစ်တဲ့ Alternator မကောင်းတော့တာ တွေကြောင့် ဒီ Charging System Warning Light ပေါ်လာတတ်ပါတယ် ။ ဒီမီးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ ကားဆက်မောင်းဖို. မသင့်ဘဲ နီးစပ်ရာ ကျွမ်းကျင်ကားဝပ်ရှော့တွေမှာ ကားအားသွင်းစနစ်နဲ. ဘတ္ထရီကို စစ်ဆေးပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီတာယာပုံစံ မီးလေးကတော့ TPMS (Tire Pressure Monitoring System) ကနေ ကားမှာပါဝင်တဲ့ တာယာတွေရဲ. လေပေါင်ချိန်မှန်မမှန် ကိုတိုင်းတာပြတဲ့ စနစ်တခုပါ ။
ဒီမီးပေါ်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ တာယာလေပေါင်ချိန်မမှန်တာ ၊ လမ်းသွားရင်း ကားတာယာ ပေါက်တာ ၊ လေစိမ့်တာ ၊ ကားတာယာ လေရော့တာ ၊ လေများတာ အစရှိတာတွေကြောင့် ဒီမီးလင်းတာ များပါတယ် ။ တချို.ကားတွေမှာတော့ Spare Tire လေလျော့ရင်လည်း ဒီမီးလင်းတတ်ပါတယ် ၊ အထူးသဖြင့် Land cruiser ကားတွေမှာဆိုရင် စပယ်ရာ တာယာရဲ. လေပေါင်ချိန်ကို တိတိကျကျ ချိန်တွယ်ထိုးပေးဖို. လိုပါတယ် ။
ကားမောင်းနေရင်း ဒီမီးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ ကားစက်ရပ်ပြီး ကားတာယာတွေကို သတိပြုစစ်ဆေး သင့်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အမြန်လမ်းတွေမှာ ကားမောင်းနေတဲ့အချိန် ကားတာယာ လေပေါင်ချိန် မမှန်တာ ၊ ကားတာယာ ပေါက်တာ ၊ ကွဲထွက်တာတွေကြောင့် ကားနဲ.လူ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတာမျိုးတွေ ကြုံတွေ. ရနိုင်ကြောင့် ကားမောင်းရင်း ဒီမီးလင်းလာတယ် ၊ ပေါ်လာတယ်ဆိုရင် အထူးသတိပြု စစ်ဆေးသင့်ပါတယ် ။
ဒီ ABS ဆိုတဲ့ Warning Light တွေကတော့ Brake (ဘရိတ်) စနစ်နဲ. သက်ဆိုင်တဲ့ မီးဖြစ်ပြီး Anti-Lock Brake System ကိုရည်ညွှန်းတာပါ ။ ဒီစနစ်က ကားကို အရှိန်နဲ.မောင်းနေတဲ့အချိန် ရုတ်တရက် ဘရိတ်ဖမ်း လိုက်တဲ့အခါ ကားစတီယာရင်ကို အသေမဖြစ်စေဘဲ လိုသလို ကွေ.နိုင်ခေါက်နိုင်အောင် ဖမ်းတီးပေးတဲ့ စနစ်ပါ ။ဒါကြောင့် ဒီမီးပေါ်လာတယ်ဆိုရင် ကားအရှိန်နည်းနည်းနဲ.မောင်းနေချိန်တွေမှာတော့ အန္တရာယ်သိပ်မရှိ နိုင်ပေမယ့် ၊ ကားကို အမြန်လမ်းလို နေရာမျိုးမှာ မောင်းနှင်နေချိန် ကားဒိုင်ခွက်ထဲမှာ ဒီမီးလင်း နေတယ်ဆိုရင် တော့ ကားမှာပါတဲ့ ABS စနစ်တွေ အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်လို. အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ Check Light ထဲ ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ထားရပါတယ် ။
ဒီ ABS မီးလင်းရတဲ့ အများဆုံး အကြောင်းရင်းတွေကတော့
Wheel Speed Sensors (ဘီးလည်ပတ်မှု အာရုံခံစနစ်) တွေ ၊ Wiring Connection
Hub ball အစရှိတာတွေ တခုခုချို.ယွင်းပျက်စီးခဲ့မယ် ဆိုရင် ABS မီးလင်းလာပါမယ် ။
ဒီ ABS မီးလင်းလာရင်ကတော့ ကားကို မြန်နှုန်းမြင့် မောင်းနှင်တာမျိုးကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပြီး ၊ ကျွမ်းကျင် ၀ပ်ရှော့တွေမှာ အမြန်ဆုံးပြသပြုပြင်သင့်ပါတယ် ။
အခုဖော်ပြထားတဲ့ Check Light5မျိုးဖြစ်တဲ့
အစရှိတဲ့ အချက်ပြမီးတွေက ကားမောင်းသူတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားရမယ့် ကားအင်ဂျင်ပိုင်းနဲ. ကားမောင်းသူကို အသက် အန္တရာယ် ထိခိုက်သည်အထိ ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ ချက်မီးတွေပါ ။ ဒါကြောင့် ဒီချက်မီးတွေကို သေချာသတိပြု လေ့လာမှတ်သားထားသင့်ကြောင်း စေတနာထား တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ ညီကိုမောင်နှမ များအားလုံး နည်းပညာ ဗဟုသုတများကြွယ်ဝြပီး အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းကြပါစေခမျာ ။
Lynn Za Nee